Yangdong -8 8-83kVA）
Fotoana famoahana: 06-23-2021
PANEL BOARD: vita amin'ny ravina vy misy hateviny mifanaraka amin'ny fitsaboana anti-oxidizing ary rakotra résin epoxy miaraka amina fiarovana. Ny tabilao tontonana dia misy: mpamadika faribolana mandeha ho azy. Ovay ny switch miaraka amin'ny toerana: "MAINS" _ "OFFP_" G ...Hamaky bebe kokoa »
Arahabaina, noho ny MAMO Power lasa ny Certification TLC!
Fotoana fandefasana: 04-26-2021
Vao tsy ela akory izay, ny MAMO Power dia nahavita tamim-pahombiazana ny fanamarinana TLC, ny fanadinana avo lenta avo lenta indrindra any CHINA. TLC dia fikambanana fanamarinana vokatra an-tsitrapo naorin'ny China Institute of information sy fifandraisana miaraka amin'ny fampiasam-bola feno. Izy io koa dia manatanteraka CCC, rafitra fitantanana kalitao, enviro ...Hamaky bebe kokoa »
Fitandremana ny fanombohana sy fampiasana setara mpamokatra gazoala
MAMO Power, amin'ny maha-mpanamboatra mpamokatra lasantsy matihanina dia hizara torohevitra vitsivitsy momba ny famonoana ireo setan'ny mpamokatra gazoala. Alohan'ny hanombohantsika mpamokatra herinaratra, ny zavatra voalohany tokony hojerentsika raha efa vonona daholo ny switch sy ny fepetra mifanaraka amin'ny seta mpamorona, ataovy sur ...Hamaky bebe kokoa »
Ny fananana fahefana azo antoka azo antoka dia zava-dehibe amin'ny fitazonana ny vaksinin'ny COVID ho tena mangatsiaka
Fotoana fandefasana: 04-13-2021
Betsaka ny zava-mitranga any Kalamazoo County, Michigan amin'izao fotoana izao. Tsy ny trano misy ny tranokalan'ny orinasa mpamokatra orinasa lehibe indrindra ao amin'ny tamba-jotra Pfizer ihany no manana ny fonenana fa fatra an-tapitrisany ny vaksinin'ny Pfizer COVID 19 no amboarina sy zaraina amin'ny tranokala isan-kerinandro. Any Western Michigan, Kalamazoo Count ...Hamaky bebe kokoa »
Tazomy ny genset-nao mba hahomby amin'ny asany
Fotoana fandefasana: 03-11-2021
Toeram-pamokarana herinaratra mahaleo tena novokarin'ny MAMO Power no nahita ny fampiharana azy ireo anio, na amin'ny fiainana andavanandro na amin'ny famokarana indostrialy. Ary ny hividianana mpamokatra andiana diesel MAMO dia atolotra ho loharano lehibe sy ho backup. Ny singa toy izany dia ampiasaina hanomezana herinaratra ho an'ny indostria na olona ...Hamaky bebe kokoa »
MAMO Power dia mpamokatra mpamokatra tambajotra matihanina any CHINA
Amin'ny ankapobeny, ny lesoka amin'ny gensety dia azo sokajiana karazana maro, ny iray amin'izy ireo dia antsoina hoe fidiran'ny rivotra. Ahoana ny fomba hampihenana ny mari-pana amin'ny rivotra iainana ao amin'ny setin'ny mpamokatra gazoala Ny mari-pana coil ao anaty ny génélie diesel dia avo dia avo, raha avo loatra ilay singa ao ...Hamaky bebe kokoa »
Engine: Perkins 4016TWG Alternator: Leroy Somer Prime Power: 1800KW Frequency: 50Hz Speed ​​Rotating: 1500 rpm Engine Cooling Method: Water-cooled 1. Structure major lozisialy elastika mampifandray ny motera sy ny alternator. Ny motera dia raikitra amina famenon-jaza 4 sy fikoropahana fingotra 8 a ...Hamaky bebe kokoa »
Fikojakojana ny génie diesel, tsarovy ireto 16 ireto
Fotoana fandefasana: 11-17-2020
1. Madio sy madio ara-pahasalamana Ataovy madio hatrany ny ivelan'ny génératera ary esory amin'ny tasy ny tavy menaka amin'ny fotoana rehetra. 2. Fanombohana mialoha ny fanombohana alohan'ny hanombohana ny lasitra mpamorona, zahao ny solika solika, habetsahan'ny solika ary fanjifana rano amin'ny setrin'ny generator: tazomy ny solika aelin'ny aotra ...Hamaky bebe kokoa »
Ahoana ny fomba hamantarana ireo napetraka génerie diesel reconditioned
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, orinasa maro no mandray ny famokarana herinaratra ho toy ny famatsiana herinaratra lehibe, ka orinasa maro no hanana olana maromaro rehefa mividy setra mpamokatra gazoala. Satria tsy azoko dia mety mividy milina faharoa na masinina nohavaozina aho. Androany, hizaha ...Hamaky bebe kokoa »
Adiresy: 17F, tranobe faha-4, plaza wusibei Tahoe, làlana 6 Banzhong, distrikan'i Jinan, tanànan'ny Fuzhou, faritanin'i Fujian, Sina